Ithegi: uphononongo olubi | Martech Zone
Ithegi: uphononongo olubi
Imithetho eli-10 malunga nendlela yokuphendula kuVavanyo olubi kwi-Intanethi
NgeCawa, ngoSeptemba 19, 2021 NgeCawa, ngoSeptemba 19, 2021 Douglas Karr
Ukuqhuba ishishini kunokuba ngumceli mngeni omangalisayo. Nokuba uncedisa ishishini ngotshintsho lwalo lwedijithali, epapashe usetyenziso lweselfowuni, yindawo yentengiso, amathuba okuba awuzukuhlangabezana nokulindelweyo ngabathengi bakho ngenye imini. Kwilizwe lezentlalo elinamanqanaba oluntu kunye nokuphononongwa, amathuba akho okufumana uphononongo olubi kwi-Intanethi asondele. Njengoluntu njengoluhlu olubi okanye uphononongo olubi, kunokuba kubalulekile ukuba uyayiqonda loo nto
Isicwangciso esimaNqaku ama-4 sokuguqula abaThengi bakho beB2B babe ngabaVangeli beBrand
NgoLwesibini, Februwari 25, 2020 NgoLwesibini, Februwari 25, 2020 URochelle Richelieu
Ukuba ubunokuchitha ngokuhlwa esixekweni ongakhange utyelele ngaphambili kwaye ubenezindululo ezimbini zokutyela, enye evela kwihotele yehotele kunye nenye evela kumhlobo, ungalandela ingcebiso yomhlobo wakho. Ngokubanzi sifumana izimvo zabantu esibaziyo kwaye sithanda ukuthembeka ngakumbi kunesindululo somntu wasemzini -yindalo nje yabantu. Kungenxa yoko le nto iimveliso zeshishini ukuya kubathengi (i-B2C) zityala imali kwiimpembelelo zokuphembelela- iingcebiso ezinobungane sisixhobo esinamandla sokuthengisa. It
Nanini na xa ndithetha ngokunyaniseka kwegama, ndidla ngokwabelana ngebali lam xa ndithenga iimoto zam. Kwisithuba seminyaka elishumi, ndandinyanisekile kwiFord. Ndisithandile isitayile, umgangatho, ukuzinza, kunye nexabiso lokuthengiswa kwakhona kwemoto nganye kunye nelori endiyithengileyo kwaFord. Kodwa konke oko kwatshintsha malunga neminyaka elishumi eyadlulayo xa imoto yam yakhumbula. Nanini na xa amaqondo obushushu esihla ngaphantsi komkhenkce kwaye ukufuma kuphezulu, iingcango zemoto yam bezisenzeka
Ukuveliswa koLwazi: Ukufikelela kwiMillennials ngeNdlela eQokelelweyo yeDatha
NgoMvulo, Novemba 28, 2016 UJohn Manganaro
Ngokophando lwakutsha nje olwenziwe nguZillow, iimillennials zichitha ixesha elininzi ziphanda, zithengela ezona ndlela zilungileyo kunye nokuthelekisa amaxabiso ngaphambi kokuthenga. Kwaye ngeli xesha litsha lomthengi onolwazi olunzulu limele utshintsho olukhulu lweemveliso kunye neenkampani, ikwabonelela ngethuba legolide. Ngelixa abathengisi abaninzi bewutshintshile umxube wabo wentengiso ukuze bajolise kwimisebenzi yedijithali, kubalulekile ngokulinganayo ukuba basebenzise ubuncwane bunye beenkcukacha namhlanje.